Waa Sidee Xaalada Amni ee Magaalada Qoryooley ee Gobolka Shabeellada Hoose-Dhegayso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Waa Sidee Xaalada Amni ee Magaalada Qoryooley ee Gobolka Shabeellada Hoose-Dhegayso
Waa Sidee Xaalada Amni ee Magaalada Qoryooley ee Gobolka Shabeellada Hoose-Dhegayso
Laamaha ammaanka Magaalada Qoryooley ee Gobolka Shabeellada hoose ayaa war ka soo saaray amniga guud ee Magaalada tan iyo markii ay dhalatay Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Godoomiye ku xigeenka amniga Magaalada Qoryooley ee Gobolka Shabeelada hoose Mudane Cabdi Axmed Cali oo wareysi siiyey xafiis wareedka Horseed Media ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu kaga hadlay xaaladda amni ee magaalada, waxaa uunasheegay in amniga degmada uu yahay mid aad u wanaagsan isla markaana aysan jirin wax dhibaato ah oo haatan ka Jira.
Sugidda Amniga Degmada ayuu sheegay inay iska kaashteen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM.
Cabdi Axmed Cali Godoomiye ku xigeenka amniga Magaalada Qoryooley ayaa sheegay in tan iyo markii ay dhalatay Bisha Ramadaan aysan jirin wax dhibaato ah oo degmadaasi ka dhacay marka laga reebo labo habeen ka hor oo rag ka tirsan urarka Al-Shabaab ay isku deyeen inay soo weeraraan hase ahaate aysan u suurta gelin.
Dhanka kale Godoomiyaha ayaa waxaa uu faah-faahin dheer ah ka bixiyey xaalada ay ku sugan Yihiin dad ka soo barakacay tuulada mudoolow oo hoos tagta Qoryooley kuwaasi oo uu sheegay inay ku sugan yihiin xaalad adag sidoo kalena la musuq-maasuqay gar-gaar loogu tala galay dadkaasi masaakiinta ah.
Aweys Bashiir Cabdiraxmaan Timo jilac ayuu u waramay.